Inqabileyo eninzi-intyatyambo yangaphakathi kunye namagatsha amancinci kunye namaqabunga amancinci, ekhangeleka njengenaliti. Kodwa bambalwa kakhulu abantu bayazi ukuba amahlumela amancinci ama-asparagus asparagus - imifuno eyintandokazi yamakhosi, abahloniphekileyo kunye nabaninzi. Oku kuyanconywa okwenene kunye nekhenkco elimnandi nelinenqabileyo. Uluntu luye lwasebenzisa i-asparagus yokutya ngamawaka eminyaka, kwaye ukususela kumaxesha amandulo iye yaxabisa iimpawu zayo ezintle. KwisiGrike saseMandulo, i-asparagus yayibhalwe njengezityalo zonyango kwaye zazinikezelwa kwiindawo zayo zokuphulukisa. Uphando lwangoku nje luqinisekisa ubungqina balo mifuno. Iintlobo ze-Asparagus
Okwangoku, iindidi eziliqela ze-asparagus zikhulile, nganye ezo zibalulekileyo kwaye zihlwaye ngendlela yazo. Uhlobo oluqhelekileyo lwe-asparagus yi-Asparagus officinalis. Kwizolimo ezolimo ezimhlophe kunye ne-asparagus eluhlaza iyalinywa. Umhlophe ungcini kwaye unomthende ngakumbi kwisinambatho, iqukethe ushukela okwengeziwe ekubunjweni, nangona ikhula phantsi komhlaba, ngoko ke iqukethe amavithamini ambalwa. I-asparagus eluhlaza inomdla ogqithisileyo kunye nomxholo okongezelelweyo wamavithamini kunye nama-antioxidants, kuquka i-folic acid.
Ukwakhiwa kokutya kwe-asparagus
I-Asparagus iyimifuno ephantsi kakhulu yeekhalori, malunga ne-kcal e-22 nganye ye-100 g. Lo mveliso onobugcisa obuthambisa umzimba kunye neemaminerali ezininzi kunye namavithamini. I-Asparagus kulula ukuyigaya, kwaye ngenxa yemxholo wayo we-fiber ephezulu, inika ixesha elide lokuxhamla. Njengengxenye ye-asparagus ngobuninzi, kukho iivithamini B, A, E kunye no-C, amaminerali: i-calcium, i-magnesium, i-potassium, isinyithi, i-phosphorus, ithusi, i-zinc, kunye ne-saponins kunye ne-aspartic acid ebandakanyekayo kwiprotein ye-protein.
Ixabiso lentlawulo ye-asparagus: iiprotheni - 2.4 g, amafutha - 0.1 g, i-carbohydrate - 4.1 g kunye ne-2 g ye-fiber kwi-100 g ye-asparagus ebilisiwe.
Umphumo we-asparagus emzimbeni
Kunzima ukubiza izitho kunye nezixhobo zomzimba, ezingenakuchukunyiswa ngokusetyenziswa rhoqo kwe-asparagus. Ukuqhelanisa inkqubo yesantya, isibindi kunye nezintso, ukuphilisa i-bronchi kunye nemiphunga, ukuhlambulula umzimba weexin. Ukusebenza ngokugqithisileyo, iivithamini kunye nezinto ezilandelwayo kwi-asparagus, zomeleza amathambo kunye nezicubu ezinxibelelwano, ukuphucula umsebenzi wentliziyo kunye ne-hemopoiesis, ukukhuthaza ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwamanxeba.
I-Asparagus inomlinganiselo obalulekileyo we-aspartic acid, eyimvelo ye-diuretic. Iitrosi zePotassium ngokudibanisa ne-aspartic acid yenza ukuba izifo kunye nezifo ezivuthayo zendlela yokucoca.
I-Asparagus ngumkhiqizo ocebileyo kwi-fiber evuselela nokulawula ukutyalwa kwegesi, ukunciphisa ukuveliswa kwegesi kunye nokuqhelanisa i-microflora yamathumbu, amathoni emathambo emathumbu, ukuphucula iinkqubo ze-metabolic.
I-Saponins ekwakheni i-asparagus inegalelo eluncedo kwi-fatabetism ye-fatabolism, ukunciphisa izinga le-cholesterol egazini, ukukhululwa kwe-bronchi kwi-sputum, isebenza njenge-bronchodilator yemvelo. I-Carotene ikhusela umzimba ekuphuhliseni amangqamuzana omhlaza kwaye ubuyisela kwakhona amehlo. U-Kumarin uyomeleza imithanjeni yegazi, ibeka ngokuqhelekileyo i-coagulability yegazi kwaye inegalelo elincedo kwinkqubo ye-cardiovascular.
I-Asparagus inkokeli kwinqaku le-folic acid phakathi kwezinye iifuno. Ukukhishwa kwama-200 amagremu kuya kufikelela kwi-80% yezidingo zomzimba kule vivamini. Abafazi abakhulelwe kunye nabaye baceba ukukhulelwa kuphela, kuyacetyiswa ukuba kufakwe i-asparagus kwimenyu ukukhuthaza uphuhliso olufanelekileyo lomntwana kunye nokunciphisa umngcipheko wokubeleka komntwana. Kwakhona, i-folic acid isinceda ekulwa nokugula okungapheliyo kunye neengxaki zentliziyo, ukuze i-asparagus ikhuthazwe ngokusisigxina kubahlali basezidolophini bahlala bexinezeleka.
Kwimali ebalulekileyo iqulethwe kwi-asparagus antioxidants, ukukhusela umzimba ekubeni uguga kwangaphambili kunye nophuhliso lomhlaza.
I-Asparagus, eqinisweni, iluncedo. Nangona kunjalo, akubona bonke abantu abanokuyidla ngobuninzi obungenamkhawulo. Ngokomzekelo, ayikwazi ukudliwa ngokunyanzeliswa kwezifo zesondlo sesisu, kuba i-saponin ibangela ukucasuka kwe-mucosa yesisu. I-Asparagus ayicebisi ukuba i-rheumatism, i-cystitis kunye ne-prostatitis. Kukho neemeko zokungahambisani kokutya kule mifuno.
Ukugcina zonke izakhiwo zokutya kunye nokuphilisa, i-asparagus kufuneka iphekwe ngokufanelekileyo. Kungcono ukuyilisa imizuzu eyi-10, le ndlela izakugcina ubuninzi bamavithamini kwaye ikuvumele ukuba ujabulele ukunambitheka okumnandi kwesi sifuno. Unokunciphisa i-asparagus ngamanzi abilayo imizuzu emi-5 ukuya kwe-8, kwaye ngokukhawuleza ukupholisa ngaphantsi komlambo wamanzi abandayo, umbala we-asparagus uya kuhlala uhlaza, kwaye kuya kuba mnandi ukukhahlela. Ncedisa i-asparagus ebilisiwe ngamasiki aluhlaza okanye amaqanda.
Iifama zeegusha: izakhiwo ezincedo
Iimveliso zokutya ezinobungozi
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo nge cystitis
Inkukhu kunye nemifuno kwi-citrus sauce
Ukulahleka kwesidlo kunokuthiwa yi-anorexia?
Isonka kunye nokuzaliswa kwesiTaliyane
Iingcebiso zengqondo zenzululwazi kubantu abanesidima esikhulu
Iimbambano zoluntu kunye nezindlela zokuzisombulula
Ikhukhi zekhofi kunye necokolethi "I-Zebra"
Iziganeko ezinomdla kunye ezingavamile ngoFebhuwari 23 ngokubambisana
Umyeni kaKsenia Borodina uKurban Omarov ubonisa ukuba amantombazana athathe iintyatyambo zokurenta
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo ye-sphalerite